Mutsva peach keke - Thermomix Mapepa | ThermoRecipes
Kudya225 maminitsi8 vanhu260 makarori
Iri keke rinofanira kudyiwa nguva dzese dzegore, asi zvakare rinotonhorera chaizvo kunwa mumwaka wezhizha. Iri keke risingashaikwe muchero uye chizi inonaka.
Kuti tiigadzire takaita chigadziko chemabhisikiti chakatetepa uye takaisa chizi uye kirimu yekuzadza. Kuti uipedze, imwe peach chunks yakawedzerwa neinonaka gelatin ine michero miviri yemichero.
Unogona kupedzisa dhizeti iyi mufiriji kuitira kuti igadzike zvakakwana uye nekudaro inotora yakanyanyisa kutonhora uye kuita chando. Iwe unozonyatsoda iwo bhisikiti uye chizi dhizaini, ine inonaka inoperekedza michero.
1 Mutsva peach keke
Keke rinonaka uye rinotapira rakagadzirwa nekirimu yakanakisa uye yechizi uye yakasviba bhisikiti. Tichaishongedza nehumwe hutanda hwemapeach zvidimbu musirasi izvo zvinoita kuti ive noutano hwakanaka uye ive yakasununguka.
Nguva yekugadzirira: 3H 30M
Nguva yakazara: 3H 45M
135 g yemabhisikiti ekugaya
85 g bota, yakanyauka
400 g yekrimu chizi mhando Philadelphia
400 ml kurova kirimu
5-6 peach halves musirasi
175 ml yemushonga wemapichisi
75 ml yemvura
2 tablespoons sitirobheri jelly
Takarova kirimu inotonhorera mugirazi reThermomix neguruguru. Kune izvi tinowedzera 500 ml yekrimu pamwe ne100 g yeshuga uye tinoronga pamusoro payo Masekondi makumi matatu nekumhanyisa 45. Nguva yekurova inoratidza kubvira kuve ruomba kungangoda nguva yakawanda kana shoma. Mune ino kesi, kana iwe uchida imwe nguva, isu tichairova kwemamwe mashoma masekonzi tisinga pfuure yako yekuzunungusa. Tinotora kirimu mugirazi ndokuisa parutivi.
Mugirazi rimwe chete usina kuchenesa uye uine bhatafurayi, wedzera iyo 450 g yekirimu chizi uirove Masekondi makumi matatu nekumhanyisa 10. Wedzera kirimu yakarohwa, fambisa zvishoma ne spoon uye sanganisa zvakare Masekonzi mashanu pakumhanya 8. Tinotora kirimu mugirazi ndokuisa mundiro ndokuisa mufiriji.
Isu tinosuka girazi uye tinowedzera 135 g yemakuki uye nekuapwanya panguva Masekondi makumi matatu nekumhanyisa 10. Isu tinowedzera iyo yakanyunguduka mafuta (tinogona kuinyungudutsa pasimba remagetsi mu microwave) uye sanganisa Masekonzi mashanu pakumhanya 5.
Isu tinogadzira pani yekeke yemasendimita gumi nemasere, yakavharwa uye inogona kubviswa muforoma. Mune yangu kesi, ini ndaisa chidimbu chegirosa rinodzivirira pepa pachigadziko kuti ndikwanise kusunungura keke zviri nyore. Isu tinowedzera bhisikiti rakapwanyika uye tinoumba rakanyatso nyorovera uye rakatsetseka. Inogona kusiiwa sezvairi kana kuiswa muchoto pa18 ° kwemaminitsi masere.
Isu tinoburitsa pani uye regai itonhorere. Tichawedzera kirimu chizi uye toiisa mufiriji kweinenge awa kuti ishande. Kana tave nayo inenge yagadzirira tichagadzirira kufukidzwa.
Mugirazi yedu yakachena tinowedzera 175 ml sirasi, iyo 75 ml yemvura, iwo mapuniko maviri eshirobheri gelatin nemapuni maviri elemon gelatin. Tiri kuzopisa nehurongwa Maminetsi matanhatu pa2 ° nekumhanya 100. Tisati tawedzera kukeke, tinoirega itonhorere.
Isu tinocheka pichesi kuita zvidimbu zvidiki uye isu tinowaridza ichivhara keke. Wedzera iyo inotonhora gelatin woidzosera mufiriji kusvikira yagadzika. Kugona kuishandira, unogona kuitora kubva mufiriji hafu yeawa usati washandira.
Tsvaga mamwe mabikirwo e: General, Desserts
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » General » Mutsva peach keke
Tuna uye chena asperagus keke